DAAWO VIDEO:Puntland oo Sheegtey Inay Xirayso Qofkii tageera Dowlada Soomaaliya - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Puntland oo Sheegtey Inay Xirayso Qofkii tageera Dowlada Soomaaliya
DAAWO VIDEO:Puntland oo Sheegtey Inay Xirayso Qofkii tageera Dowlada Soomaaliya
July 14, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland 17
Puntland Ayaa la Sheegay Inay Xirtay Nabadoon tageero Xoogan u Muujiyeey Dowlada faderalka Soomaaliya.
waxayna Sheegtay Inay talaabo ka qadayso Qofkii tageera Dowlada Soomaaliya,talaabadani Nabadoonka Lagu xiray Ayaa Ah Mid Ugub ku Ah Puntland.
Isbadal Amniga oo Kismaayo Looga Dhawaaqay kadib qaraxii
Dawladii Budhleyn waxey muujineysaa iney iyadu Dawlad tahay oo looga danbeeyo afaaraheeda. Kkkk Dawlada Armaajo xidhiidhkii ayaanu u jarney bey leeyihiin. Kolkaas cidii amarkaas Dawlada kasoo baxey hareer martaa waa jeelka.
Waxeynu sugnaaba waa fikradaha kuwa Budhleyn taageersan.
Taariikhda dib halooxasuusto waxa dadkii faraha badnaa ee gobolada koofureed ku noolaa waxa Gobolkay lahaayeen ka ceyriyay. Nabadglyada ookoofur ku sii xoogeysata waraabayaashaan waa laga tagayaa Hayaankaas mar hore ayuu bilowday balmilicsada magaalooyinka Puntland qaar baa hada guryihii way ka dhisanyihiin laakiin lama degena.
INDHAHA HALAGU hayo socodkaas.
ma jamhuuriyada barakaysan 2,baynu ubixinaa kkkkkkkkkkkkkkk
waligodba way ina copy gareyn jireen.
inkastoy copygii nidaamka xisbiyada badan ku guuldaraysteen.kkkkkkkkkk
Xamar ka buux baadtahay, SSDF imiyaad idinku copy-eynin 1978? Siyaad Barre (AUN) miyeysan idin barin in lala dirikaro? Nidaamka dowkiga waa wax hore u qornaa oo dunidu oo dhan ku dhaqanto, maxaad adiga dunida ku soo kordhise oo lagaa copy-yeeyaa? Shame on you Somali Qaldaan.
Hadan ka hadlo Dadka laxirxirayo gar ahan somaliland & puntland & kuwo kale,qofka hadu ugafo masul sare waxu muteysan kara Ciqaab Xarig ama ganax ama 2labadaba,masulka waxa dhalili kara masuul kale ama xisbi siyasi ah madax ka’ah hase yeshe qof iska cadi ah in uu ja’ifeyo masul sare wa wax xun oo khaldan,qofka xukumada laxisabtamaya ha’ahado qof Xisibi leh oo lolan kujira.
Kkkk kkkk kkkk kkk maamul qabiil meel buu la’yahay, iduur iyo majeerten waa labada qabiil ee somalia 🇸🇴 ugu cuqdad iyo caddfad xun, qofkasta oo somali tageera waa xarig, labada dawladood ee majeerteen Iyo iduur iyaga horta ha is ictiraafan, hana ku heshiyen tukarraq oo hadda laga saado maleeshiyo beeleedka iduur.
PUNTLAND- G7 & G20 member says:
Aabbihi federalismkaa waa inaa loo sajuudaa.
sulub soo baro afsoomaaliga suuban mase waxaa tahay maxamed sulubkii kiinyaatiga ahaa oo neeroobi daganaa kkkkkkkkkkkk
Binti girl.. waa gar bay u leedahay waxa afaareheeda soo gala in ay xidho.
Budhleyn intuu Deni joogo ayay ka goosaneysaa Soomaaliya. Ifafaalaheygu sidaas ayuu u eg yahay. Kolkaas waa Jamhuuriyad aanan weli makhsinka kasoo bixin. Waxaan ogahay inaanay Armaajo iyo Kheyrlaawe deyneyn ka takhaluska Maamul Goboleedyada oo ay marka kasoo dhamaadaan Galmudug iyo Jubaland ay Budhleyn usoo dhiganayaan. Jamhuuriyadaas daahsoona aysan ka tanaasuleyn is maamulideeda. Kolkaas waxay qaadanayaan qodobka ay Dastuurka ku darsadeen ee ah inay Budhleyn ku dhawaaqi karto Maamul ka Madaxbanaan Muqdisho hadii ay Muuqdisho nabad la’aani ka jirto wakhti dheer. Ama hadii Federaal Dalka laga dhigi waayo. Qodobka hore wuu fuley oo nabad la’aan sodon sano gaadheysa ayaa ka jirta Muqdisho. Kan labaadna Armaajo ayaa wad wada oo raba inuu ka takhaluso Federaal Systemkaba. kkkkkk
Marqaannews waa xero dameeraad ay eeyduurta iyo dameeraha looga kala tagay
Marqaannews oo iduurka caydooda u qaata amaan majeerten